Ebe a na -ekpofu ahịhịa n'akụkụ m, mwepụ ahịhịa na mkpokọta ihe mkpofu a pụrụ ịtụkwasị obi
By Na -agba egwu September 15, 2021 Health, Nzughari 0 Comments
- Nchapu ihe mkpofu dị m nso -
Ndị ụlọ ọrụ na -emepụta ọ bụghị naanị atụmatụ njikwa mkpofu dị irè iji chekwaa ego na ịkwalite arụmọrụ. Ihe ọzọ dị mkpa mere a ga -eji debe usoro nchịkwa ihe mkpofu nke ọma bụ mmetụta ha nwere ike inwe na gburugburu ebe obibi.
Ọ bụrụ na anaghị ekpofu ahịhịa ahịhịa azụmaahịa nke ọma, ọ nwere ike imebi usoro ihe ndị sitere n'okike. Ọzọkwa, ọ nwere ike igbu ma ọ bụ mebie anụmanụ. Ọ nwekwara ike bute mmetọ dị egwu. Ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ndị ọkachamara mkpofu mkpofu na ndị na -ahụ maka mkpofu ahịhịa. Jikere ịmụta maka ụfọdụ ihe mkpofu ahịhịa dị m nso.
Njikwa mkpofu siri ike na -ezo aka na nchịkọta, ọgwụgwọ na mkpofu ihe mkpofu siri ike nke rụgoro ọrụ ya ma ọ bụ na -ejighịzi eme ihe.
Ọnọdụ adịghị ọcha nwere ike ịpụta site na mkpofu ihe mkpofu siri ike nke ime obodo, nke nwere ike ibute mmetọ gburugburu ebe obibi yana ntiwapụ nke ọrịa na-ekesa ọrịa (ọrịa nke òké na ụmụ ahụhụ na-ebu).
Ọrụ nchịkwa mkpofu siri ike na-ebute ọtụtụ ihe isi ike teknụzụ. Ha na -ebutekwa nsogbu nke nchịkwa, akụ na ụba na mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke a ga -elebara anya.
Gịnị bụ mkpofu ahịhịa ma ọ bụ mkpofu ahịhịa?
Ọ dị mkpa ịmara ihe mkpofu ahịhịa bụ tupu ị banye n'ime mkparịta ụka gbasara mkpofu ahịhịa na -esote m. Nnukwu ahịhịa nwere ike na -ezo aka na ihe mkpofu nke buru oke ibu nke a na -agaghị atụfu n'ime ihe mkpofu ahịhịa gị.
Ọzọkwa, mkpofu nwere ike ọ gaghị abụ nnukwu ihe, mana ọ nwere ike bụrụ na ọnụọgụ buru oke ibu ka ọ dabara na ite ahịhịa ụlọ gị.
Ọ bụrụ na ị nwere ezinụlọ mgbe niile, ị nwere ike mee ka ọ bụrụ omume gị ịme nnukwu nhicha otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'afọ. Anyị niile anụla maka “nhicha mmiri,” mana ọtụtụ ndị mmadụ na -ejikwa izu ole na ole ikpeazụ nke ihu igwe dara ọfụma mee ụfọdụ nhicha dị mkpa tupu oge oyi abịa.
Na agbanyeghị ugboro ole ma ọ bụ mgbe nnukwu nhicha a nwere ike bute nnukwu mkpọmkpọ ebe nke nwere nnukwu ihe na obere ihe. A
Etu ị ga -esi tufuo nnukwu ahịhịa gị
Ị nwere ụzọ ọzọ maka iwepụ nnukwu ihe mkpofu ma ọ bụ nnukwu. Ikekwe ihe kacha pụta bụ ime ya n'onwe gị. Okwu dị na usoro a bụ na ebe ọtụtụ mmadụ nwere ụgbọala, ọ bụghị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọtụtụ gwongworo nke aka ha.
Na, n'agbanyeghị na ị nwere ike itinye nsị niile ahụ na akpati gị, ọ bụ ihe a na -eleghị anya na ọ baghị uru.
Ya mere, nke a na -ebute ịnweta ụgbọ ma ọ bụ ikekwe ụlọ na -adọkpụ ewepụghị iji wepu na iwepụ nnukwu mkpofu gị.
Ị nwere ike ịga n'ihu n'ụzọ ndị a ma ọ bụrụ na ị maara onye dị njikere ma ọ bụ gbazinye gị ma ọ bụ ụgbọala. Ụgbọ ala dịkwa maka ịkwụ ụgwọ.
Mana ọ ga -achọ ọ bụghị naanị mmanụ ụgbọ ala kamakwa mgbazinye ụgbọ ala na mkpuchi ịkwụ ụgwọ. A ka ga -emerịrị nhọrọ ọ bụla - ibuli, ibu, na idobe ibu ahụ - yana ibubata ya na nkwụnye ego ma ọ bụ ihe mkpofu mkpofu ndị ọzọ.
Mgbe ahụ, n'akụkụ mkpofu ahihia, enwere ụgwọ dị mkpa a ga -akwụ. Enwere ike itinye ụgwọ nkwụfu ego, yana ụgwọ maka ụdị akụkọ ndị ọzọ dịka akụrụngwa Freon, elektrọnik, na ihe ndị ọzọ na nke a.
Ụzọ nke abụọ iji wepu ihe mkpofu bụ were onye ọrụ were mee ya. N'ọtụtụ mpaghara nke mba ahụ, ị ​​ga -ahụrịrị ndị na -ewe ndị ọrụ na -ebufe ihe mkpofu ma ọ bụ mkpofu, mana nke a anaghị abụkarị ụzọ kachasị dị mma ma ọ bụ nke akụ na ụba.
Ịkpọ ọrụ iwepụ ihe mkpofu pụrụ iche dịka Junk King fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe kacha mma maka ihe ọ bụla achọrọ iji wepu nsị gị.
Ụdị ihe mkpofu ma ọ bụ ihe mkpofu siri ike
N'okpuru bụ ụfọdụ ụdị mkpofu:
Jụ ma ọ bụ mkpofu siri ike nke obodo
Nke a na -ekwu maka mkpofu siri ike na -adịghị ize ndụ ewepụtara n'ime obodo nke chọrọ nchịkọta na njem gaa na ebe nhazi ma ọ bụ mkpofu (MSW). Ihe mkpofu na ahịhịa bụ ihe atụ nke ihe mkpofu.
Ọzọkwa, ihe mkpofu gụnyere n'ụzọ bụ isi ihe mkpofu nri na -emebi emebi. Ọ bụ ezie na nsị gụnyere ihe akọrọ dịka iko, akwụkwọ, akwa, ma ọ bụ osisi. Ahịhịa na -esi ike nke ukwuu ma ọ bụ na -emebi emebi, ebe mkpofu anaghị adị.
Ihe mkpofu elektrọnik, ma ọ bụ e-n'efu
Ihe mkpofu elektrọnik ma ọ bụ e-n'efu bụ ụdị ọzọ nke ihe mkpofu siri ike. Ikekwe ọ bụ mpaghara na-eto ngwa ngwa n'ọtụtụ mba mepere emepe.
Ọzọkwa, ọ gụnyere akụrụngwa kọmputa tụfuru, telivishọn, ekwentị, na ọtụtụ ngwa eletrọniki ndị ọzọ.
Nchegbu gbasara ụdị mkpofu a na -eto eto. Iwu gọọmentị nwere ike ịdị mkpa iji chịkwaa imegharị na mkpofu ihe ndị dị mkpa na ngwa elektrọnik, dị ka lead, mercury, na cadmium.
Ntanetị ihe mkpofu dị m nso na njirimara mkpofu siri ike
N'okpuru bụ ụfọdụ njirimara mkpofu ahịhịa na ihe mkpofu siri ike:
1. Ihe mejupụtara na Njirimara
Ebe obibi, azụmahịa, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe bụ isi mmalite nke mkpofu siri ike. Ha na -akọwa ihe ojoo di egwu dị ka ihe mkpofu nke na -ebute ndị mmadụ ma ọ bụ gburugburu gbara egwu ozugbo.
Ọzọkwa, ha na-atụle ihe ndị a n'edemede njikwa mkpofu ihe egwu. Njirimara nke ihe mkpofu siri ike dịgasị iche n'etiti obodo na mba. Dịka ọmụmaatụ, mkpofu America dị mfe karịa mkpofu Europe ma ọ bụ Japan.
Na United States, ngwaahịa na mpempe akwụkwọ na -ede ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 40% nke mkpokọta Ọnụ ego MSW, ebe mkpofu nri na -erughị 10%. Mkpụcha osisi, osisi, iko, igwe, plastik, akpụkpọ anụ, akwa na ihe ndị ọzọ dị iche iche mejupụtara nke ọzọ.
MSW nke ụdị a na -atụ ihe dị ka kilogram 120 n'otu mita cubic mgbe ọ na -atọpụ ma ọ bụ na -enweghị ntụpọ (kilogram 200 n'otu cubic yad).
Ọnọdụ ala, ọnọdụ akụ na ụba, oge nke afọ, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na -emetụta ọnụọgụ ndị a.
2. Nchekwa na Ọgbọ
Mmeputa ihe mkpofu siri ike di iche. O mepụtara mkpofu ime obodo na nkezi ihe ruru kilogram abụọ (kilogram 2) kwa ụbọchị na United States, dịka ọmụmaatụ.
Japan na -emepụta ihe dị ka ọkara nke ego a, ebe Canada na -emepụta kilogram 2.7 (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilogram isii) kwa ụbọchị. N'ime mba ụfọdụ na -emepe emepe, nkezi ọnụego otu onye kwa ụbọchị erughị kilogram 6 (otu paụnd).
Data ndị a na -ekpuchi mkpofu azụmaahịa, ụlọ ọrụ yana ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana mkpofu ụlọ. Mgbe obodo na-echepụta usoro nhazi ihe mkpofu siri ike, a ga-etinyerịrị ọnụego mkpofu ahịhịa nke ọma.
Iji belata mwakpo nke òké ma ọ bụ ụmụ ahụhụ na ísì ọjọọ, ọtụtụ obodo na-achọ ka a na-edebe ihe mkpofu ụlọ ka ọ bụrụ ihe siri ike, ngwa ngwa ehicha ya na mkpuchi siri ike.
Ihe mkpuchi Galvanized ma ọ bụ plastik a na -ejikarị olu dị ihe dị ka lita 115 (galọn 30), ebe obodo ndị ọzọ na -eji nnukwu akpa nwere ike ibuli elu ma bupụ ya n'ime ụgbọ ala nchịkọta.
Maka iburu akụkụ ụzọ, ọ na -ejikarị akpa rọba dị ka ahịrị ma ọ bụ ihe mkpofu enwere ike. Mgbe a na -emepụta nnukwu ihe mkpofu, dị ka ebe a na -ere ahịa, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ma ọ bụ ogige ụlọ, ọ nwere ike iji ihe mkpofu maka nchekwa nwa oge ruo mgbe achịkọtara mkpofu.
Ntanetị ihe mkpofu dị m nso na usoro nchịkọta mkpofu siri ike
Usoro nhazi ihe mkpofu dị m nso bụ ndị a:
1. Ịnakọta na Ụgbọ njem
Maka ichekwaba ahụike ọha, nchekwa na ịdị mma gburugburu, mkpokọta mkpofu siri ike dị mkpa. Ọ bụ ọrụ na-agbasi mbọ ike nke na-ewe ihe ruru ụzọ n'ụzọ anọ nke mmefu mkpofu mkpofu siri ike.
Ọ bụ ezie na a na-ekenyekarị ndị ọrụ ọha na ọrụ ahụ, ọ na-adị ọnụ ahịa oge ụfọdụ maka azụmaahịa nkeonwe iji rụọ ọrụ n'okpuru nkwekọrịta ya na ndị obodo ma ọ bụ ka ndị nwe ụlọ kwụọ ya ụgwọ site n'aka ndị nwe ụlọ.
Ụgbọ ala nchịkọta ọ bụla nwere ọkwọ ụgbọ ala na otu ma ọ bụ abụọ na -ebu ihe. Ndị a na -agbachikarị, na -agbakọ gwongworo nwere ikike ruru mita atọ atọ (cubic 30). Ọ ga -ekwe omume ibu ibu site n'ihu, azụ, ma ọ bụ n'akụkụ.
Ịhọrọ ụzọ nchịkọta kacha mma bụ nsogbu na -enye nsogbu, ọkachasị n'obodo ukwu ndị mmadụ juputara na ya.
Ụzọ kacha mma bụ nke na -arụpụta ọrụ na akụrụngwa kachasị dị irè, na ịhọrọ ụzọ dị otu a na -ebute ojiji nke ọmụmụ kọmputa nke na -eburu n'uche ọtụtụ ihe okike dị na netwọkụ buru ibu ma dị mgbagwoju anya.
Ihe na -agbanwe agbanwe gụnyere ugboro nchikọta, ogologo njem, ụdị ọrụ, na ihu igwe. Ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ pere mpe n'ime ime obodo, mkpokọta mkpofu nwere ike bụrụ ihe ịma aka pụrụ iche, na -ebute oke ọnụ ahịa otu.
2. Ngwọta na mkpofu siri ike
Ọ nwere ike hazie ọchịchị ime obodo ahịhịa siri ike mgbe nchịkọta gasịrị iji belata olu na ịdị arọ nke ihe a ga -atụfu.
A na -enye ọgwụgwọ ahịhịa iji mezie ọdịdị ya ma mee ka ọ dị mfe ijikwa ya. Enwekwara ike iji ya megharịa ma ọ bụ jigharịa ihe ụfọdụ akọwapụtara yana ike ọkụ.
3. Ọkụ na arụ ọrụ ọkụ
Ọ bụ ezie na ọ bụ ụzọ dị oke mma iji belata olu na ịdị arọ nke ahịhịa siri ike, ọkụ na -ewepụta ikuku griin haus. Na oge a oku oku, a na -akpọ ahịhịa ahịhịa n'ọkụ a rụrụ n'ụzọ pụrụ iche n'okpuru njikwa siri ike.
Akụkụ na -ere ọkụ nke ihe mkpofu ahụ na -eji ikuku oxygen emepụta carbon dioxide, vepo na mmiri. Inye ọkụ nwere ike belata ihe mkpofu na -anaghị emetụta ihe karịrị 90%, na -ahapụ ntụ ntụ nke ntụ ntụ, iko, ọla na ihe ndị ọzọ siri ike.
Ọzọkwa, onye na-etinye ọkụ na-eburu gas ndị na-esi n'ọkụ na-erechaghị ere, yana irighiri irighiri ihe ndị mara mma nke a maara dị ka uyi.
Ha ga -adabara ọgbara ọhụrụ oku oku na ngwa njikwa ihe ọkụkụ zuru oke iji na-anakọta anwụrụ ọkụ na ihe ndị na-esi na mmiri tupu a tọhapụ ha n'ime ikuku.
Ihe nzacha akpa akwa, ihe nchacha gas acid, na ndị na -eme ka electrostatic bụrụ ihe atụ nke akụrụngwa dị otú ahụ. Maka ozi ndị ọzọ, hụ njikwa ikuku.
N'ọtụtụ ọnọdụ, a na -agwakọta ntụ ntụ na uyi na -efe efe ma tụfuo ya na nsị. Ọ bụrụ na ha achọpụta ọla dị ize ndụ na ntụ, a ga -ele ya anya dị ka ihe mkpofu dị egwu.
Iji nweta ma na -ere ihe mkpofu mgbe niile, ha na -ewepụta ihe ọkụ na -ere ọkụ nke ime obodo maka mkpofu siri ike. Enwere ikike dị ukwuu maka ihe dị ka otu ụbọchị ịchekwa ihe mkpofu na ngalaba nchekwa mkpofu miri emi.
Ha na -esi na olulu welie kreen nke e ji bọket ma ọ bụ ihe na -adọgbu adọgbu. A na -etinye ya na gwongworo wee tụda ya na oven wee hapụ ya na eriri ma ọ bụ ngwaọrụ nchekwa.
Igwe ihe na -egwe ọka na -ama jijiji wee na -awụsa ahịhịa n'ime oven ka ikuku wee na -aga gburugburu ihe a na -agba ọkụ. Ha na-eji ọkụ nwere akụkụ anọ arụ ihe nsure ọkụ nke oge a, agbanyeghị, ekwú ọkụ ọkụ okirikiri okirikiri na oven na-agbagharị ga-ekwe omume.
N'ime ọkụ, ọkụ na -eme na nkebi abụọ: nke mbụ na nke abụọ. A na -ewepụ mmiri n'oge ọkụ mbụ, na -erepịakwa ihe mkpofu ma na -agbanwe agbanwe.
Ọkụ nke abụọ na -eme ka ikuku na irighiri ọkụ na -erepịghị ọkụ belata, na -ewepụ isi ma na -agbada oke anwụrụ anwụrụ na nchacha.
Mgbe mkpofu na -adị oke mmiri mmiri, a na -eji gas ma ọ bụ mmanụ mmanụ eme ihe mgbe ụfọdụ iji bido ọgbụgba ọkụ mbụ.
Ntanetị ihe mkpofu dị m nso na ụgwọ mkpofu
Ọtụtụ ụlọ ọrụ achụmnta ego na -ekpofu ihe mkpofu ha na -ekpofu ahịhịa. Nke a bụ n'ihi na ịtụfu nsị gị na ebe a na -ekpofu ihe adịghị ọnụ karịa ka ụlọ ọrụ ọkachamara na -ahụ maka mkpofu mkpofu megharịrị ma ọ bụ tụgharịa ya.
Ọ bụ ezie na mkpofu ahịhịa nwere ike nwekwuo mmetụta akụ na ụba na obere oge, ịkwesịrị ịtụle nsonaazụ ga-adịte aka.
N'ikpeazụ, mgbe ị nwere azụmahịa, ị nọ n'ime ya ogologo oge. Ya mere, ekwesịrị ịtụle mmefu ogologo oge nke mkpofu ahihia siri ike.
Mgbe ị na -agbakọ mmefu mkpofu, ị ga -atụlekwa eziokwu na oge gị bara uru. Ọtụtụ ndị nwe ụlọ ọrụ na -enwe mmasị n'iwefu ihe mkpofu ha niile n'otu ebe na -enweghị ikewapụ ya.
Biko buru n'uche, agbanyeghị, na ọrụ nrụgharị ụlọ ọrụ dị mfe ịnabata ma nwee ike nyere gị aka belata mmetụta gburugburu ebe obibi gị.
Mmetụta nke njikwa mkpofu adịghị mma
Ufodị nke mmetụta adịghị mma ma ọ bụ nke na -ezighi ezi nke njikwa mkpofu gụnyere:
Mmetọ Mmiri Elu
na -eme mgbe nsị, kemịkal, na irighiri ihe ndị ọzọ na -asọba n'oké osimiri ma ọ bụ osimiri, na -emetọ mmiri ruo ebe a na -agbanwe kemịkalụ ya.
Mmiri e metọrọ emetọ pụrụ imerụ anụmanụ, osisi, na mmadụ ahụ, ọ pụdịdị ịbanye n'ime ala mebie ihe.
Naanị ụdị mmetọ nke kwesịrị ichegbu onwe ya abụghị ihe mkpofu siri ike na mmiri mmiri.
Nlekọta adịghị mma nke ahịhịa nwere ike tinye aka na mmetọ ikuku nke na -emetụta ọ bụghị naanị na gburugburu ebe obibi kamakwa na -ebute nsogbu iku ume mmadụ, dị ka ụkwara ume ọkụ.
Nchegbu nke Ọrịa na Ịdị Ọcha
Njikwa mkpofu adịghị mma nwere ike ibute ihe egwu ahụike yana ohere nke ntiwapụ ọrịa nwere ike ịbawanye.
Na mpaghara niile na -ata ahụhụ site na mmetọ ma ọ bụ mkpofu iwu na -akwadoghị, ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike ịrịa ọrịa na obodo niile ma ọ bụrụ na ha bi nso na mkpofu ma ọ bụ ụlọ mkpofu nke ejighị nke ọma.
Kedu ka azụmaahịa nwere ike isi nyere aka
Ntughari ahịhịa bụ azụmahịa pụrụ iche. Ụlọ ọrụ ndị Amerịka na -ewepụta ihe mkpofu ihe ruru nde pound kwa afọ, site n'akwụkwọ mebiri emebi ruo na ngwaọrụ ndị mebiri emebi. Ọ dịkwa mkpa ka ụlọ ọrụ tinye aka na ijikwa na ikpofu ahịhịa ha mepụtara n'ụzọ ziri ezi.
Ighaghachi ahịhịa ahịhịa nwere ike imegharị bụ otu n'ime ihe kachasị mfe otu nwere ike ime iji nyere aka na njikwa ihe mkpofu. Ọzọkwa, Nzughari Ọ bụghị naanị na ọ na -egbochi ihe mkpofu ebe a na -ekpofu ahịhịa kamakwa ọ na -enye ohere ka e weghachi ma ọ bụ tụgharịa ihe mkpofu ha na -emepụta.
Nkwụsịtụ Eletrọniki Kwesịrị Ekwesị
Ọtụtụ ngwa elektrọnik, ọbụlagodi obere dị ka batrị na ekwentị mkpanaaka, nwere kemịkal dị ize ndụ nke nwere ike imerụ gburugburu ebe obibi.
Ulo oru kwesiri ileba anya na ekpofu ngwa ha nke oma site na oru mkpofu ahihia elektrọnik.
Ntanetị ihe mkpofu dị m nso: Ụdị mmetọ ahịhịa
N'okpuru bụ ụfọdụ ụdị mmetọ ihe mkpofu:
1. Mmetọ Mmiri na Plastic
Mmetọ mmiri bụ ngwakọta nke kemịkal na ihe mkpofu, nke ihe ka ọtụtụ n'ime ha na -esite na ala wee saa ma ọ bụ fụọ n'oké osimiri. Mmetọ a na -emebi gburugburu ebe obibi, ahụike nke ụdị niile, yana ụlọ ọrụ akụ na ụba ụwa.
N'ụwa taa, mmetọ ikuku bụ okwu na -arị elu. Ụdị mmetọ abụọ na -ejupụta n'oké osimiri anyị: kemịkal na ihe mkpofu.
Maka ahụike, gburugburu ebe obibi, na ebumnuche akụ na ụba, mmetọ kemịkal ma ọ bụ mmetọ ihe na -edozi ahụ bụ nchegbu. Ụdị mmetọ a na -eme mgbe ọrụ ụmụ mmadụ, ọkachasị ojiji fatịlaịza n'ime ugbo, na -eduga n'ịgba ọsọ nke kemịkal n'ime iyi na -asọba n'oké osimiri.
Mmụba kemịkalụ na mmiri n'ụsọ mmiri, dị ka nitrogen na phosphorus, na -akwado mmepe nke ifuru algal nke dị ize ndụ nye anụ ọhịa ma na -emebi ndị mmadụ.
Algal na -ama ifuru, ma nwee mmetụta na -emerụ ahụ na ahụike na gburugburu ebe obibi, na azụ azụ mpaghara, na ụlọ ọrụ njem.
Ihe mkpofu mmiri na -agụnye ihe niile, ọtụtụ n'ime ha bụ plastik, na -ejedebe n'oké osimiri. Nrụpụta ihe a, 80% nke sitere na isi mmalite dị na ala, ihe mkpofu na -ebugharị, oke ebili mmiri, na njikwa adịghị mma.
Mpekere mmiri ndị a na -ahụkarị gụnyere ọtụtụ ihe plastik, dị ka nsị sịga, okpu karama, ihe mkpuchi nri, na ngwa ịkụ azụ, gụnyere akpa na igbe.
Nsogbu nke ahịhịa plastik dị ka ihe na -emerụ emerụ bụ ọkachasị n'ihi na ọ na -adịte aka. Ọ na -ewe ọtụtụ narị afọ ka ihe plastik mebie.
Mgbochi na nhicha bụ ihe ngwọta mmetọ mmiri. N'ụwa taa nke plastik nwere ike ịtụfu na otu, site na akpa maka ịzụ ahịa ruo nkwakọ ngwaahịa maka ibuga karama rọba.
Usoro dị ogologo na nke akụ na ụba ga -agbanwe ụzọ ọha mmadụ si etinye plastik. N'ụzọ dị iche, ụfọdụ ihe nwere ike ha agaghị ehicha. Enwere ọtụtụ ụdị ihe mkpofu (gụnyere ụfọdụ plastik) ndị na -anaghị ese n'elu mmiri, yabụ na miri n'ime mmiri na -efu.
Plastik na -ese n’elu nnukwu “patches” n’ọdụ ụgbọ mmiri na -agbakọtakarị.
Ụfọdụ Nsogbu nke Mmetọ Plastic Mmiri
Ọ bụrụ n'ịmụta banyere ụfọdụ nsogbu butere mmetọ plastik mmiri, ị ga -enwe ekele maka mkpofu ahịhịa n'akụkụ m.
Ọtụtụ nsị mmiri (80%) na-esite na isi ala, dị ka ahịhịa na irighiri ihe na-asọba n'ime obodo.
Ihe nsị, ahịhịa, na mpekere sitere na ihe owuwu, ọdụ ụgbọ mmiri, na ọdụ ụgbọ mmiri, ebe azụmahịa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na nsị nke si na ihe mkpofu ahịhịa, ụgbọ ala, na ebe a na-ekpofu ahịhịa bụcha ihe atụ nke isi ala.
Isi mmalite sitere n'oké osimiri dị ka mbupu ụgbọ mmiri na-akwụ ụgwọ maka 20% fọdụrụ na ngwa ịkụ azụ hapụrụ. Ihe oriri na nkwakọ ngwaahịa na -abụkarị ihe mkpofu siri ike nke obodo (nde tọn 80 ma ọ bụ pasent 31.7).
Ngwaahịa ndị a, yana akpa plastik, na-abụkarị ihe mkpofu mmiri (ya bụ, igbochi ihe na-erughị 5mm dị ka mbadamba plastik, iberibe, na iberibe polystyrene).
Nkwakọ ngwaahịa na ihe ndị a na-eji ihe mkpofu eme ihe abụghị naanị ihe a na-ahụkarị na ahịhịa mmiri, mana ha na-anọchitekwa anya iji akụrụngwa dị ụkọ (mmanụ, osisi, isi ike, mmiri).
Ihe mkpofu plastik na -emetọ agbụ nri mmadụ. Mgbe ndị nyocha si Algalita gaa njem na Oké Osimiri Pacific na 2008, ha chọpụtara na azụ na -eri iberibe plastik na ihe mkpofu. Pasent 35 nke azụ 672 ejidere na njem ahụ bụ plastik loro.
Plasticlọ ọrụ plastik na -etinye nde kwuru nde dọla kwa afọ na idu ndú Kọmitii Chemical nke America (ACC) iji mee ka ndị na -eme iwu na ndị California kwenye na ngwọta mmetọ plastik dị na mkpọsa megide mkpofu nke na -ekenye ibu ọrụ nke mkpokọta mmiri.
Agbanyeghị, ha etinyela obere ego na agụmakwụkwọ ọha yana nke ukwuu n'ịkwado ndọrọ ndọrọ na-akwalite plastik.
Mmetụta nke ahịhịa na -adịghị mma
Ewezuga ihe mkpofu ahịhịa dị m nso; ọ ga -amasị gị ịmụ gbasara ụfọdụ mmetụta ahịhịa na -ejighị n'aka? Ọ bụrụ ee, gee ntị biko.
Enwere ike ikpokọta ahịhịa ahụ n'akụkụ osimiri na akwa mmiri n'akụkụ osimiri na oke osimiri ụwa niile.
Ihe mkpofu a mebiri gburugburu ebe obibi anụ ahụ, mmetọ kemịkal na -ebuga, ndụ mmiri n'ihe egwu, yana mmerụ osimiri, oke osimiri na oke osimiri.
Ihe mkpofu plastik na -emetụtakarị gburugburu ebe obibi, anụ ọhịa na mmadụ. Nke mkpofu niile. Ha nwere ike ịhụ ya n'elu ka ọ na -ese n'elu mmiri, kwụsịtụrụ n'ime ya, ma ọ bụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ala mmiri ọ bụla.
Osimiri na -eburu ya n'oké osimiri, nnụnụ na ihe oriri na -eri ya ugboro ugboro; Ogige ndị na -emerụ ahụ na -etinye anya na anụ ahụ na afọ ha juputara, na -ebute agụụ.
Mmetụta ebe obibi
Ihe mkpofu na-ebute mgbanwe na ebe obibi na ihe mkpofu na mpaghara njikọta n'oké osimiri, n'ụsọ osimiri, na ebe mmiri na-erikpu (na na ala ala mmiri na oke osimiri).
Nchịkọta irighiri ihe nwere ike ibute ngbanwe nke ebe obibi, belata ọkwa ọkụ na mmiri dị n'ime ala, na ibelata ikuku oxygen. Mgbanwe ndị a nwere ike mebie ikike ịchekwa ndụ mmiri n'ime mmiri mepere emepe na gburugburu ikuku.
Dika ụdị ndị na-emepụta ebe obibi na-apụ n'anya ma na-agbanwe usoro anụ ahụ, enwere ike inwe mmetụta na-apụtaghị ìhè nke irighiri mmiri, dị ka mfu na ụdị ndị dabere na ebe ndị a maka nri na ebe mgbaba.
Dị ka ihe atụ, mmụba nke oke mmiri coral nwere ike imerụ nlanarị nke ọtụtụ invertebrates, azụ, na ahịhịa na -adabere na akụ a amachibidoro iwu, gụnyere ọtụtụ ụdị adịghị ike na ihe egwu.
Mmetụta kemịkal nke ihe mkpofu mmiri plastik gụnyere mkpokọta na mbufe nke mmetọ na -adịgide, bioaccumulative, na nsí (PBTs), dị ka PCB na ọgwụ ahụhụ.
Chemicals PBT bụ ogige kemịkalụ na -eguzogide mbibi (na -akụda), na -agagharị agagharị na gburugburu, ma na -egbu egbu nke ukwuu.
Egosila ahịhịa ahịhịa plastik dị n'ime mmiri na -anakọta mmetọ site n'ike nke oke (puku kwuru puku ruo ugboro nde) karịa usoro gburugburu ebe obibi.
Plastik nwere ike ị nweta kemịkalụ nchegbu sitere na gburugburu ebe obibi, yana ije ozi dị ka usoro ụgbọ njem zuru ụwa ọnụ maka mmetọ na -emetụta n'ime eriri nri yana enwere ike nye ndị na -eri nri mmiri, dị ka ọtụtụ ọmụmụ, gụnyere ndị EPA duziri. .
A na -edepụta ihe ọjọọ na -esi na mkpofu plastik mmiri na -ebute na osimiri na ụdị mmiri.
Mkpofu ahihia plastik mmiri, gụnyere pasent 86 nke nduru mmiri, pasent 44 nke nnụnụ mmiri mmiri, na pasent 43 nke mammals mmiri nwere amụma na ọ ga -emetụta opekata mpe ụdị anụmanụ 267 n'ụwa niile.
Ihe iyi egwu kacha emetụta ụmụ anụmanụ bụ ihe egwu anụ ahụ na -esite na nbanye na njikọta, yana nchegbu toxicological kpatara oriri nke ihe na -emetọ ihe jikọtara na irighiri plastik wee daba n'ime ha.
Ọzọkwa, Iwu EPA dị ọcha na mmemme CERCLA nwere ngwa iji belata ihe egwu dị na mmetọ dị otu a, nke ha nwere ike iji.
Mpekere mmiri mmiri plastik nwere ike itinye aka na igodo ozugbo, na -egbochi azụmaahịa azụmaahịa na ntụrụndụ, ahụike na nchekwa dị ize ndụ, na ibelata njem nlegharị anya, na mgbakwunye na imebi gburugburu ebe obibi na ọrụ gburugburu ebe obibi mmadụ na -atụkwasị obi.
Nnukwu irighiri ihe, dị ka ụgbụ azụ a gbahapụrụ agbahapụ na ahịrị ndị na -ese n'elu ma ọ bụ n'akụkụ elu, kacha dị ize ndụ maka igodo ụgbọ mmiri.
Ahịrị na ụgbụ nwere ike ịrapara na ntinye nke injin wee kechie ndị na -ebugharị, ụgbọ agha nwere ike ịjikọ na nnukwu ihe, na -emebi okpokoro na mkpọsa.
Mkpofu mmiri nwekwara ike imebi ụmụ mmadụ ozugbo, dị ka ịkebere na ụgbụ na ahịrị mgbe igwu mmiri ma ọ bụ mmiri mmiri, ma ọ bụ merụrụ ahụ site na mpekere dị nkọ na -agbakọta n'ụsọ osimiri.
Ndị SCUBA na -achọkarị ụgbụ ma ọ bụ ahịrị. N'ọtụtụ ọnọdụ, ụmụaka nwere ike hapụ onwe ha. Ntigide akpatala mbibi na ọbụna ọnwụ n'ọnọdụ ndị a na -adịghị ahụkebe.
Ọzọkwa, irighiri ahịhịa ndị na -agbakọta n'ụsọ mmiri na -ebutekarị ọnya mgbawa na ọnya. Nfufu ọgwụ, dị ka agịga hypodermic, dị ize ndụ ọkachasị ebe ntụpọ nwere ike gbasaa ọrịa na ọrịa.
A na -eji Xbox One
Nri Mediterenian dị m nso
Nnyocha nke ihe mkpofu plastik site na nyocha ịdị ọcha n'ụsọ osimiri na gburugburu ebe obibi na -enye data amachibidoro maka usoro sara mbara yana akụkọ buru ibu.
A chọrọ nleba anya sara mbara na ogologo oge n'ofe mba ma ọ bụ gburugburu ebe obibi, gụnyere oke osimiri na oke nha iji nweta nyocha ziri ezi na dabara adaba nke plastik na nsonaazụ ya.
Ebumnuche nke mmemme mmiri na-enweghị mmiri nke EPA bụ iji belata ụdị ngwaahịa na nkwakọ ngwaahịa na-ejedebe dị ka mkpofu mmiri (ọkachasị ngwaọrụ eji eme ihe).
Site n'ibelata oke mkpofu na -abanye n'ime osimiri na mkpofu mmiri, anyị nwere ike belata ya nke ukwuu.
Biko hapụ nkọwa gbasara edemede a (Nwepu ahịhịa N'akụkụ m). Ọzọkwa, amasị, ma kesaa ndị enyi na ezinụlọ akụkọ a!
Tags:Ọrụ republic na -ebu nnukwu kalenda 2021, Nhazi oge ọrụ republic 2021, mkpofu Republic, ọrụ mkpofu ụlọ, ahihia oru, akara ekwentị njikwa mkpofu, Usoro nhazi ihe mkpofu 2021, a ga -enwe mkpofu ahịhịa echi
Mmanụ ndị dị mkpa akwadoro maka ọnya: Otu esi egbochi ọnya
Bursitis: mmanụ dị mkpa nke nwere ike inye aka belata ọrịa bursitis
Ego ole ka a na -akwụ gị n'ezie iji nye onyinye Plasma?